Korontana ao Toamasina «Misy ambadika politika», hoy Famindra Justin
RN 7 - Toliara Maty tao anaty fiara ilay vehivavy
Nahazo loharanom-baovao ny zandary fa misy fiara mitondra vehivavy marary mampiahiahy niainga teto Antananarivo nihazo an’i Toliara ny 3 jolay teo.
Lalàna mifehy ny PAC « Mila hazavaina amin’ ireo mpisehatra nasionaly rehetra”
Ireo fiovana lehibe naroson' ny Antenimieram-pirenena dia ny fanesorana ny fandikan-dalàna ara-toekarena sy ara-bola izay eo ambanin` ny fiahian` ny fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (PAC),
Jeneraly Richard Ravalomanana “ 31 185 no efa tratra, mbola hohenjanina ny sazy”
Hampihatra ny lalàna ny zandarimaria, ny polisim-pirenena, ny tafika. Fitiavana sy fitsinjovana ny vahoaka Malagasy no tanjona ary mampalahelo ny tsy
Minisiteran` ny fiarovam-pirenena Novatsiana fitaovam-piarovana ny “Usine militaire”
Ho fanohanana an` ireo toeram-pitsaboana sy ny toeram-piasan’ ny eo anivon’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena (usine militaire) dia namatsy fitaovam-piarovana (EPI) izy ireo.
Manameloka ny endrika fambolena korontana sy fanambarana miendrika fanonganam-panjakana tany Toamasina ny depiote Famindra Justin,depiote voafidy ao Toamasina I.
«Hatramin'ny voalohany dia efa nilaza aho fa misy endrika politika ny zava-misy ao Toamasina Nisy ireny karazana fanambarana ireny, mazava be kanefa ny fialan'ny filoham-pirenena ve no vahaolana nefa aretina no resaka? Ny rano ao Toamasina voalaza tsy azo sotroina noho ny Ambatovy kanefa iza no nampiditra an'io orinasa io? Tsy tamin'ny andron' i Ravalomanana? ». Tsy tokony hampihemotra ny fitondram-panjakana ny kajikajy politika voizina izao. Na izany anefa dia ny fitsapahan` ny tsirairay ny filaminana no zava-dehibe sy miatrika ny krizy. Tsy hisy ny zava-banona raha mbola ho savorovoro.